Posted by ယောနသံစင်ရော် at 2:38 PM 14 comments
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 11:40 PM6comments
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 12:37 AM6comments
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 11:09 PM9comments
အာရောဂျံ ပရမ္မံလာဘံတဲ့ .. ဒီလိုစရေးလိုက်လို့ ကျန်းမာရေးအတော်လိုက်စားတယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ ခုတလောမှာ အိမ်ရှိလူကုန် တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေတော့ .. အာရောဂျံ ပရမ္မံလာဘံ ဆိုတဲ့ ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတပါး ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး ခေါင်းထဲကို အလိုလိုဝင်လာတယ်။ အော် .. လူဆိုတာ ကျန်းမာတော့မှပဲ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါနိုင်တော့တာပါလား။
လူမှာအဓိက က ကျန်းမာရေးပဲ.. ဒါကြောင့်လည်း လူကြီးမိဘတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမယ် ကျန်းမာရေးဂရုစိုက် ဆိုတာကို အမြဲတစေမှာတတ်ကြတာကိုး။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရ လူအခြင်းခြင်း ပဋိသန္ဓာရစကားဆိုနှုတ်ဆက် ရင်တောင် နေကောင်းတယ်နော်၊ ကျန်းမာရဲ့မဟုတ်လားတို့ နဲ့ အစချီပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတာမဟုတ်လား။ အင်္ဂလိပ်တွေလို ကောင်းသောနေ့၊ ကောင်းသောညလို့ နှုတ်ဆက်တဲ့အလေ့အထသိပ်မရှိကြဘူး။ မြန်မာတွေ ကျန်းမာရေးကို အတော်အလေးထားတာသိသာတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ .. လူကျန်းမာမှ ကျန်တဲ့ စီးပွားရှာတာ၊ ပညာရေး၊ လူမူရေး အားလုံး အစဉ်ပြေချောမွေ့နိုင်တော့မှာကိုး။
ကျန်းမာရေးလိုက်စားလားလို့မေးရင် သိပ်မလိုက်စားဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းပြောမရသလို၊ အမြဲတမ်းပုံမှန် လေ့ကျင့် ခန်းလုပ်နေတဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဘယ်အားကစားကို အကြိုက်ဆုံးလည်းဆိုရင် တင်းနစ် လို့ ဖြေလိုက်ပေမဲ့ တင်းနစ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ရိုက်ဖူးတဲ့သူဖြစ်မနေပြန်ဘူး။ ဘယ်အားကစားတွေလုပ်ဖူး ခဲ့တုန်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုလည်းဖြေဖို့ဆိုရင်တော့ မစို့မပို့လေးရေကူးဖူးတယ်၊ ငါးလလောက်တောက်လျှောက် အေရိုးဘစ် ကစားတယ်၊ နောက်နှစ်တော်တော်ကြာတော့ အမျိုးသားရေကူးကန်မှာဖွင့်တဲ့ အားကစားရုံမှာမနက်ဆိုသွား ကစား တာတွေကိုပဲ လေသံပျော့ပျော့လေးနဲ့ပြောနိုင်မှာပါ။
အဲ..ရဲရဲတင်းတင်းပြောနိုင်တာဆိုလို့ လမ်းလျှောက်တာပါပဲ။ လမ်းလျှောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုများ အရေးတယူ ပြောရတယ်လို့ စိတ်တော့မစောသွားကြပါနဲ့ဦး။ အထက်ကလေသံပျော့လေးနဲ့ပြောပြခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက သူငယ်ချင်းတွေ အဆွယ်ကောင်းလို့သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ လိုနေပြီဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ခံပြီးသွားလုပ်ခဲ့ပေမဲ့။ တကယ်တမ်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သင်တန်းအပြီး ဟိုဒီလျှောက်သွားလမ်းသလားခဲ့တာတွေကြောင့် ထိထိရောက်ရောက်ဘာမှ သေချာမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ ဘူး။ လမ်းလျှောက်တာတမျိုးကိုပဲ ထိထိရောက်ရောက်သေသေချာချာ လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
နောက်ပြီးပြောရမှာလည်း အားရပါးရရှိတယ် လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်ခြံဝန်းလေးတင်လျှောက် ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်တော်ကြီးကို နေ့တိုင်းတပတ်လမ်းပတ်လျှောက်ခဲ့တာပါ။ ပထမတော့ ဖိုးစိန်လမ်းထိပ် ကနေ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နားထိပဲလျှောက်တာပါ။ နောက်တော့နေ့တိုင်း ဒီလောက်လေးလျှောက်ရတာ ချွေး တောင်မစို့တာ နဲ့ တနေ့ နည်းနည်းပိုပိုလျှောက်ရင်းနဲ့ ကန်တော်ကြီးတပတ်ဖြစ်သွားတယ်။ လမ်းလျှောက်လို့ မောပြီးချွေးစို့လာတော့ကန်တော်ကြီးရဲ့ ရေပြင်ကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေညှင်းလေးကိုရှုလိုက်ရင် အမောကိုပြေ လို့။
မနက်တိုင်း ၅နာရီ အိပ်ရာထ ကန်တော်ကြီးတပတ်လမ်းလျှောက် ၆နာရီ၁၅မိနစ်လောက်ဆို အိမ်ပြန်ရောက် နံနက်စာစား ပြီးတော့ရုံးသွား။ အဲတုန်းကဆိုရင် အဖျားအနာဖြစ်ခဲတယ် ကြီးကောင်ဝင်ထဲက ခံစားရတဲ့ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တတ်တဲ့ရောဂါလည်းပေါ်မလာတော့ဘူး၊ နောက်ကြောတက်တာလည်းမဖြစ်တော့၊ ဘာစား စားဝလာတယ်မရှိလို့ အကြိုက်ကိုတွေ့လို့ပေါ့။ ဒီလိုလမ်းလျှောက်တာကြာလာတော့ လမ်းလျှောက် ရတာကို သဘောကျလာတော့တယ်။ ရုံးကအပြန်ဘစ်ကားတွေသိပ်ကျပ်တဲ့နေ့တွေဆို မြို့ထဲပန်းဆိုးတန်း ကနေ အိမ်ရှိတဲ့ ကန်တော်ကြီးနား အထိကို လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ဖူးတာ အကြိမ်ပေါင်း မရေနိုင်ဘူး။
ရန်ကုန်ကနေခွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စားဝတ်နေရေးပင်လယ်ထဲစီးမျောနေလိုက်တာ ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ မလုပ် ဖြစ်တော့။ တနေ့တနေ့ အလုပ်ကိုအပြေးအလွှားသွား အလုပ်မှာဦးနှောက်ကို အရည်ပါညှစ်ထုတ် လိုက်ရသလို လုပ်ခဲ့ရလို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မောပန်းပြီး ခြေလက်တောင်မသယ်ချင်တဲ့ ဘဝထဲမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး နေလာလိုက်တာ ဆယ်စုနှစ်တစုနီးပါးရှိလာခဲ့ပြီ။ သမီးမွေးပြီးရင် လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ အင်္ကျီတွေဟာလည်း ယောင်္ကျားကသတိရတိုင်း စနောက်စရာတခုလိုဖြစ်လို့။ (ခုတောင် စာ ရေးရင်းဖိနပ်လေးကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသေးတယ်)
သူစလည်း စချင်စရာပါပဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ တနေ့နေလို့ အိမ်ပေါ်က အိမ်အောက်ကိုမဆင်းမိတဲ့ ရက်တွေပဲများလာတယ်။ နိစ္စဓူဝ သမီးကိစ္စလုပ်ကိုင်ပေးနေရင်းနဲ့ နေကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိဖြစ်လာတယ်။ ဒီကြား ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလုံး အိမ်ရှိလူကုန် တရှောင်ရှောင်ဖြစ်ကြတော့ ဒီ ကျန်းမာရေး နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့ စာလုံးကြီးကို တွဲတွဲပြီး မျက်စိထဲမြင်ယောင်ယောင်လာတယ်။ အရင်တုန်းကများ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လေးလုပ် နေတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ပုံမှန်လည်ပတ်မျှတနေတယ်။ ခုတော့ နည်းနည်းလေးဆို ခေါင်းကိုက်ရတာနဲ့ ဗိုက်အောင့်တဲ့ရောဂါလည်းပြန်ဖြစ်လာပြန်တယ်။(အမအိမ်လွမ်းသူ ဆီမှာဓာတ်စာသွားတောင်းရသေးတယ် - ကျေးဇူးတင်တယ်အမရေ..)
လူကနေမကောင်းမှတော့ စိတ်လည်းမကြည်လင်။ ဘာလုပ်လုပ် ဘာပြောပြော စိတ်ကမရှည်ချင်။ မျက်နှာ ကဘယ်လောက်တောင် သုန်မှုန်နေလည်းဆိုရင် ဈေးဆိုင်သွားတာတောင်မှ ဆိုင်ကလူတွေက နေမကောင်းဘူး လားလို့ မေးယူရတဲ့ အထိပါပဲ… ။ အော် .. အာရောဂျံ ပရမ္မံလာဘံ ဆိုတာမှန်လိုက်တာနော်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိတဲ့အချိန်တွေထဲကဖဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလေး ပုံမှန်ပြန်လုပ်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားရပေဦးမည်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ .. ဒီအတိုင်းသာ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘာမလုပ်နဲ့ ဆက်သွားနေရင် .. သက်တော် ၁၂၀ ရှည်စေသောဝ် ဆိုတဲ့ ရက်ချူပ်ဇာတာပေါ်က ဆုတောင်းလေးကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခွင့်မရလိုက်မှာကို စိုးရိမ်လွန်းလှ ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၀၉
နံနက် ၁၂း၁၂ မိနစ်
(Photo Credit to http://www.sxc.hu/profile/glumus)
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 12:23 AM6comments
ပညာရေးအသားပေးကဏ္ဍများပါဝင်သည့် သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ(၃)အမှတ်(၁) ထွက်ရှိလာပါပြီ။ သံလွင်အိပ်မက်မှာပါတဲ့ မိုးခေါင်လွင်ပြင်၌ပျိုးသောပန်းခင်း ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 5:42 PM6comments
ဓာတ်ပုံတွေအောက်မှရည်ညွှန်းချက်စာတွေကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ပုံပေါ်ကို Click ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 12:08 AM 1 comments
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 6:31 PM 8 comments
မျက်လုံးတွေကို ဖြတ်ကနဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က လှဲလျောင်းလျက် အနေအထားမို့ အိပ်ရာထဲမှာ ဆိုတာ သေချာသိလိုက်တယ်။ ဒါဖြင့် ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ … ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းပြန်ထုတ်နေမိတယ်။ ခြေရင်းက ပြူတင်းပေါက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အလင်းရောင်မှုန်ပြပြ မြင်လိုက်တယ်တော့မှ အာရုဏ်ဦးအ လင်းရောင်ဆိုတာကို သတိထားမိသွားတယ်။ အော် ..ညက အလုပ်ကပြန်လာပြီးတော့ ပင်ပန်းလွန်းလို့ အိပ်ရာပေါ် ခဏဆိုပြီး လှဲလိုက်တာ မိုးလင်းသည်အထိ အိပ်လိုက်မိတာကိုး။
ပြူတင်းပေါက်က မြင်ရတဲ့ရောင်နီဖြဖြကို အိပ်ရာက မထပဲကြည့်နေတုန်းမှာပဲ ဟိုးဝေးဝေးဆီက အိပ်တန်းကနိုးပြီး ကယောင်ကတမ်းတွန်လိုက်တဲ့ ကြက်တွန်သံကိုကြားလိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာနွေးထွေးသွားပြီး အာရုံတွေလည်း လန်းဆန်းလာတယ်။ နေ့သစ်တခုကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။ နည်းနည်းချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာတာနဲ့ စောင်ကိုမေးဖျားအထိ ရောက်အောင်ဆွဲခြုံလိုက်မိတယ်။ ဒီလိုဆောင်းတွင်းမျိုးမှာအိပ်ရာနိုးနိုးခြင်းမထသေးပဲ စောင်ခြုံကွေးရတာလောက် ကောင်းတဲ့ အရသာမရှိဘူး။ အပြင်မှာ နှင်းမြူတွေများဆိုင်းနေပြီလား။
အိပ်ပျော်မလိုဖြစ်သွားတုန်းမှာ .. "ပဲ....ပြုတ်၊ နံပြား………." အသံကို အနိမ့်အမြင့် နဲ့ ဆွဲဆွဲငင်ငင် အော်လိုက်တဲ့ ပဲပြုတ်သည် အသံဟာလည်း နားဝင်ကိုချိုနေတာပဲ။ ပဲပြုတ်နံပြားကို ပဲဆီဆိမ့်ဆိမ့်လေးဆန်း စားပြီး ကော်ဖီပူ လေးနဲ့ မျောချလိုက်ချင်ပေမဲ့ အိပ်ရာကထရမှာပျင်းနေတာနဲ့ပဲ ဒီနေ့တော့ လမ်းထိပ်က မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကို ချီတက် မယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်တယ်။
အော်.. မေ့နေလိုက်တာ ဒီနေ့ စနေနေ့ပဲ..။ အလုပ်သွားစရာမလိုတဲ့နေ့ ကောင်းလိုက်တာ .. ဒါဆိုရင်တော့ ပန်းဆိုးတန်း စာအုပ်အဟောင်းတန်းဘက် သွားဦးမှပဲ မှာထားတဲ့ စာအုပ်ဟောင်းလေးတအုပ်ရပြီလား စနည်းနာ ရင်း နဲ့ အမေ့အိမ်တို့၊ စာပေလောကတို့ဝင်မွှေပြီး စာအုပ်လေးဘာလေးဝယ်ဦးမှပဲ။ ဖတ်စရာစာအုပ်တွေကုန်နေပြီ။ ဝမ်းစာဆိုတာဖြည့်နေရတယ်တဲ့... ဝမ်းစာပြည့်မှ အကြည်ဓာတ်ရတယ်ဆိုတာကလား။
အဲ.. နောက်ပြီးတော့ လောကနတ်ပန်းချီခန်းပေါ်လည်းတက်ဦးမှ.. ပန်းချီမောင်ဒီ၊ ပန်းချီကြီးမြင့်စော၊ နေမျိူးဆေး တို့ရဲ့ ကားတွေ ပြပွဲရှိနေတယ်တဲ့ ။ ပန်းချီကြီးမြင့်စောရဲ့ "ရန်ကုန်ည" ပန်းချီကားလေး တင်ထားတယ် ပြောတယ် နာမည်ကြီးကားလေးကို သွားကြည့်မှ.. သွားကြည့်ဦးမှ။
အော် … ရေးလက်စ ကားလေးရပ်ထားရတာ ခုမှသတိရတယ်။ ဒါဆို လောကနတ်ပန်းချီခန်းက အပြန် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွားရဦးမှာပဲ ကုန်နေတဲ့ အာခရစ်လစ် (Acrylic) ဆေးလေးနည်းနည်းပါးပါးဝယ်ရမယ်။ စုတ်တံ ပြားလေးလည်း တချောင်းလောက်ထပ်ဝယ်ရမယ်။ ရှိနေတဲ့ဟာက ဖိရလွန်းတော့ အနားတွေဖွာပြီး ယပ်တောင် ဖြစ်နေပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့ ရိုးရာပန်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးပြခန်းကိုလည်း ဝင်ကြည့်လိုက်မှပဲ မရောက်တာ လည်းကြာ နေပြီဆိုတော့ ပန်းချီကားသစ်တွေတင်ထားမှာပဲ။
အဲ .. ဈေးရောက်မှတော့ နေ့လည်စာကို ဈေးမှာပဲစားတော့မယ်။ ဦးကြွိ ဘဲပေါင်းဆီချက် မစားရတာကြာပြီ စားပြီးရင် ဘေးဆိုင်က ရွှေရင်အေးမှာပြီး တဝကြီးသောက်လိုက်ဦးမှ။ အမေ့တို့ကိုပြောခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့ဦး တော်ကြာ ထမင်းစားစောင့်နေဦးမယ်။ သူတို့ကလည်း စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မိသားစုလေးလက်စုံစားချင်တာပေါ့။ ကိုယ်က တော့ အားတဲ့ရက်ဆိုတော့ .. သွားစရာလေးတွေကိုသွားချင်တဲ့ စိတ်ကများနေတယ်။
အင်း.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း မတွေ့ရတာကြာပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက အပြန် ၃၂လမ်းကိုဘက်လှည့် လိုက်ဦးမယ်။ ဆရာဆူဒိုနင် နဲ့လည်း မပွားရတာကြာပြီ ၃၉ လမ်းက ဆရာ့အလုပ်ခန်းကို ဝင်တွေ့လို့ရသေးတယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ငါ့အကြံနှယ်….။ တချက်ခုတ်သုံးလေးငါးချက်ပြတ်အောင်တော့လုပ်မှ .. ရတဲ့ အားရက်က စနေရယ် တနင်္ဂနွေရယ် နှစ်ရက်ထဲရယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင် .. စကားတွေပြောရင်းနဲ့ နေ့လည် ၃နာရီလောက်အထိဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့။ ကောင်းတာပဲ ဒါဆိုလည်း .. မြို့ထဲကနေဆို တရုတ်တန်းကို နီးနီးလေး .. ၁၉လမ်းမှာ ဆန်ပြုတ်နဲ့ ဘဲသားသုတ် သွားစားလိုက်မယ်။ ဟိုကောင်တွေကတော့ သောက်မှာပဲ.. သူတို့သောက်တဲ့ဆိုင် အရင်မဝင်ခင် ငါ့ ဆံပြုတ်ဆိုင် ကို အရင်သွားစားဖို့ဆွယ်ရမယ်။ အမေ့ကိုတော့ ညစာပါ အပြင်မှာစားမယ်ပြောပြီး တနင်္ဂနွေ မှ မိသားစုနဲ့ ထမင်းအတူတူ စားပါ့မယ်လို့ ဂတိပေးခဲ့ရမယ်။
အင်း .. ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်တွေက မူးရင်ရစ်တတ်တယ် ယောင်္ကျားလေးတွေဆိုတော့ ရစ်ပြီးစကားထများ နေလို့ ကတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့သောက်တဲ့ဆိုင်မှာ ငါတယောက်တည်းမိန်းကလေး ဘာလုပ်နေရမှာ တုန်း ငါလည်းဝင်မော့လို့ရတာမဟုတ်ဘူး အကင်လောက်ပဲစားလို့ရမှာ။
ရှုပ်ပါတယ်.. အင်းလျားကန်ဘောင်သွားမယ်လို့ပြောမှ၊ ဒါကောင်းတယ် ဘူးသီးကြော်စားရင်း .. ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ရသွားနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ပန်းချီဆွဲဖို့အာရုံခုခုပေါ့။ ကျောင်းကိုလည်း အလွမ်းပြေသွား ကြည့်လိုက်ချင်သေးတယ်။ ဝင်လို့တော့ရမယ်မထင်ဘူး.. အင်းလျားဘက်အပေါက်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေက ညနေ မှောင်ရီတရောဆို ဝင်တဲ့သူကိုဆွဲတတ်တယ်ဆိုပဲ။
အဲတော့…ခုမှသတိရတယ် အနော်ရထာလမ်းပေါ်က ညဘက်ပလက်ဖောင်းပေါ်ခင်းရောင်းတတ်တဲ့ ဈေးသည်တွေ ဆီက အစွန်းချွတ်ဆေးလည်းဝယ်ချင်သေးတယ်။ ဟိုနေ့က ရုံးအကျီင်္အချဉ်ရည်တွေပေသွားတယ်။ ကျောက် မြောင်းထဲမှာပေါ့ ပုဇွန်ခွက်ကြော်သုတ်စားရင်းနဲ့လေ။ အင်း.. ငတ်တယ်လို့ပြောလည်းခံရုံပဲ တတ်နိုင်ဘူး။ ခုလည်းကြည့်လေ…အင်းလျားသွားချင်တယ် ဆိုပြီးတော့ စိတ်က မီးသတ်နားက ဒေါ်ရိတ်ကြီးရဲ့ မြင်းခွာရွက်သုတ် ကိုလွမ်းနေတယ်။
ဒေါ်ရိတ်ကြီးဆိုင်မှာထိုင်ပြီး လူတွေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ အိမ်ပြန်ကြ..လိုင်းကားတွေတဝှီးဝှီးနဲ့ နီယွန်မီးအောက်မှာ အလုအယက်မောင်းနေတာကို ရေနွေးကြမ်းတအိုးနဲ့ ထိုင်မြည်းရင်း တခါတခါ "ထူးအိမ်သင်ရဲ့ မြို့ပြညများ" ကိုနှုတ်က တိုးတိုးညီးမိတာတောင် သတိမထားလိုက်မိတဲ့ အခါတွေရှိတယ်။
ညဘက်ကြမှ အမေနဲ့ အဖေ့ကို ရွှေတိဂုံဘုရားဘက်ခေါ်သွားလိုက်ရင် တနေ့လုံးလျှောက်လည်ထားတဲ့ သူတို့သမီးကို စိတ်ပြေကောင်းပါရဲ့။ အမေတို့တော့ ဓာတ်လှေကားစီးချင်စီးကြပါစေ ကိုယ်ကတော့ ဘုရားကုန်း တော်ပေါ်ကို လှေကားနဲ့ပဲတက်မယ်။ စောင်းတန်းကဈေးသည်တွေရဲ့ ဈေးခေါ်တဲ့ အသံလေးတွေက နားထောင် ကောင်းလွန်းလို့။
ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်ရင်တော့ အမေတို့ ပုတီးစိပ်နေတုန်းမှာ တန်ဆောင်းတခုထဲဝင်ပြီး ဘုရားကြီးပေါ်က ခေါင်းလောင်းလေးတွေ လေတိုက်လို့လှုပ်တဲ့အသံသာသာလေးကို ကြည်နှုးမှုနဲ့ထိုင်နားထောင်ပစ်လိုက်ဦးမယ်။ ကံကောင်းရင် ဘုရားရှိခိုးကို ဌာန်ကရိုင်းကျကျဆိုပြီး ရှိခိုးနေတဲ့သူ တယောက်ယောက်ရဲ့ အသံကိုပါနားထောင်ခွင့် ရနိုင်တယ်။ ဘုရားပေါ်ကအဆင်းကြရင်တော့ စံပယ်ဖူးပန်းကုံးတွေ အိမ်ကဘုရားကိုကပ်ဖို့ ဝယ်သွားဦးမှ။
ဟဲ့ .. ငါ့စောင်ကို ဘယ်သူလာဆွဲတာတုန်း။ ဒီမှာ တနေ့လုံးအတွက်အစီအစဉ်ကို ချမ်းချမ်းနဲ့ စောင်ခြုံထဲကွေးရင်း စဉ်းစားနေတာ။ အို.. အို .. ဆံပင်တွေကို ဆွဲပြန်ပြီ.. ဒီတခါတော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့မှပဲ။ မျက်လုံးဖွင့် လိုက်တော့ မျက်ဝန်းနက်နက်လေးတစုံကိုတွေ့လိုက်တယ်။ "ဒါ.. ဒါ .. ဒါ.. မားမား.. မား.." မပီကလာ အသံလေးကို ကြားတော့မှ အော်….သမီးလေးပါလား.။ သူတယောက်ထဲ နိုးနေလို့ အမေကို လာနိုးနေတာကိုး ။
ဟင် !!! ဒါဆို .ခုရောက်နေတာ .. မြန်မာပြည်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ခုနက တွေးနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေ…. အားလုံး ……. ဘာတွေလည်း အိပ်မက်တာလား .. မဟုတ်ပါဘူး ပဲပြုတ်သည်အော်သံကို အတိအကျကြားလိုက်ပါတယ်။ လင်းကြက်တွန်သံကြီးရော… ရန်ကုန်မဟုတ်ရင် ဘယ်က ကြက်တွန်သံကြားရမှာ လဲ။
အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတဲ့ စိတ်တွေအားလုံးကို ကမြောသောပါးစုစည်းနေရင်းနဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာဟာသွားတယ်။ ဟာတာတာရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ထပ်တူ လူလည်း ဝမ်းနည်းပန်းနည်းဖြစ်သွားတယ်…။ ရောက်နေတဲ့ အရပ်ဒေသဆီကို စိတ်တွေပုံမှန်ပြန်ရောက်တော့မှ မွေးမြေရပ်မြေနဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာနေသောမျက်နှာစိမ်းတို့၏ အရပ်ဒေသ။
ပဲပြုတ်သည်မလာသော..လင်းကြက်တွန်သံလေးမှရေးရေးမကြားရသော…..ပန်းဆိုးတန်းစာအုပ်အဟောင်းတန်း မရှိသော.. မြန်မာ့အလှပန်းချီကားများမရှိ..၊ ၃၂ လမ်းမရှိ…၊ ဒေါ်ရိတ်ကြီးမရှိ..၊ ၁၉လမ်းမရှိ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမရှိ..၊ ရင်မခုန်သောဒေသ.. ခံစားချက်မရှိ.. .. ပျော်ရွှင်မှုမရှိ…မိဘမရှိ.. ချစ်ခင်သူများမရှိ… မရှိ… .. မရှိ… ဘာမှ မရှိသော အရပ်ဒေသတခုမှာခြေစုံရပ်လျက်သား။ မိသားစုဘဝတခုတည်ဆောက်လျက်သား။
ပြန်ရန်လမ်းဖြင့်တနေ့ရောက်လာဦးမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လေးမျှရှိမနေရင် သေဆုံးပြီးသည်နှင့် ထပ်တူကျမည့် ဘဝတခုကို ထမ်းပိုးလျက်… ရှိသော လူတယောက် နှင့် သူချစ်သောသူနှစ်ယောက်။ ဘဝသည် စနှင့်ပြီးဖြစ်နေ၍သာ ဆက်၍သယ်ပိုးနေရသည်…လွတ်ချခွင့်ရှိရင်လွတ်ချလိုက်ပြီး အသစ်မှပြန်ကာစလိုက်ချင် တော့သည်။
ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်မယ်ဆိုလျှင် တောင်းမည့်ဆု တခုသာရှိပါသည်။ ။
ဇန်နဝါရီလ ၁၀ရက်၊ ၂၀၀၉
(စိတ်ကူးအိမ်မက်များ .. အတွက် တဂ်ထားတဲ့ ညီမ Mirror အတွက် အမှတ်တရ)
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 1:30 AM 11 comments